अन्ततः धोनी सिरिजबाट आउट, दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
अन्ततः धोनी सिरिजबाट आउट, दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध को–कोले पाए मौका?
काठमाडौंः भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी दक्षिण अफ्रिका विरुद्धको सिरिज खेल्न नपाउने भएका छन ।
धोनीको स्थान ऋषभ पन्तलाई टिममा मौका दिइएको छ । धोनीसँगै तीब्र गतिका बलर जसप्रित बुमराहलाई पनि आराम दिइएको छ । धोनीले यो बीचमा दुई महिनाको ब्रेक लिएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस धोनी सेनाको ड्यूटीमा व्यस्त
टिममा हार्दिक पण्ड्यालाई ल्याइएको छ भने दिपक चहर र राहुल चहरलाई फेरि मौका दिइएको छ ।
भारतीय टिमले १५ सेप्टेम्बरदेखि दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको तीन खेलको टि–२० सिरिज खेल्नेछ ।
बिसिसिआईका एक वरिष्ठ अधिकारिले न्यूज एजेन्सीसँग भने अनुसार वर्ल्ड टि–२० भन्दा अगाडि भारतीय टीमले २२ टी–२० खेल खेल्ने छ ।
यो सिरिजको पहिलो खेल १५ सेप्टेम्बरमा धर्कशाला, दोश्रो खेल मोहाली र तेश्रो २२ सेप्टेम्बरमा बेंगलरुमा खेलिनेछ ।
यस्तो छ सिरिज खेल्ने भारतकाे पूरा टिमः विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उप–कप्तान),शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पाण्डे, ऋषभ पन्त, हार्दिक पाण्ड्या, कुणाल पाण्ड्या, रविन्द्र जडेजा, वाशिङटन सुन्दर, राहुल चहर, खलील अहमद, दीपक चहर र नवदीप सैनी
याे पनि पढ्नुस रोहितले आज पूरा गर्न सक्छन् यी २ कीर्तिमान
ट्याग्स: भारतीय क्रिकेट टिम, महेन्द्र सिंह धोनी